Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Tonga amin'ny alatsinainy izao ny minisitry ny UK dia ao amin'ny trano fisotroana
Ho any amin'ny trano fisotroana pub ny minisitry ny UK
Ny praiminisitra UK Boris Johnson dia nilaza fa: "Ny Alatsinainy faha-12, handeha ho any amin'ny toeram-pisotroana aho ary hanangona am-pitandremana nefa tsy miverina amin'ny fametahana labiera labiera amin'ny molotro," satria nesorina ny dingana famerana COVID-19 manaraka.
Manomboka ny alatsinainy 12 aprily dia hanomboka ny dingana manaraka amin'ny fanalefahana ny famerana COVID-19 ny UK.
Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta UK dia manandrana manakana ny mpandeha tsy handefa ny COVID-19 amin'ny toerana fialantsasatra malaza.
Hikatona hatramin'ny 17 Mey farafahakeliny, ny dia iraisam-pirenena.
Ny minisitry ny UK dia hiditra ao amin'ny trano fisotroana iray hankalaza satria androany izy dia nanao sonia an'i Angletera niditra tamin'ny dingana manaraka amin'ny fanalefahana ny fameperana COVID-19, izay midika fa ny fivarotana antsinjarany tsy ilaina toy ny fivarotana sy ny fisakafoanana ivelany dia afaka misokatra manomboka ny alatsinainy 12 aprily 2021.
Na izany aza, mbola tsy voafaritra ny daty hanokafana ny firenena amin'ny fitsangatsanganana iraisampirenena, ka tokony hipetraka mafy i Brits amin'ny fanaovana drafitra fialantsasatra fahavaratra farafaharatsiny hatramin'ny 17 Mey. COVID variants manangana toerana matanjaka erak'izao tontolo izao, misy firenena 39 ao amin'ny lisitra mena ao UK anisan'izany ny Emira Arabo Mitambatra, Brezila ary Afrika Atsimo. Ny fitomboan'ny aretina vaovao dia nahitana toerana fitetezam-paritra malaza, toa an'i Frantsa sy i Espana, nilentika tany anaty hidin-trano, ary io dia fanidiana henjana tokoa miaraka amin'ny drafitra vaksinina haingana izay nanakana ny fiparitahan'ny COVID-19 farany teo. Hatramin'izao dia efa ho ny antsasaky ny mponina no nahazo ny vaksiny.
Hoy ny PM Johnson: “Manantena izahay fa afaka mandeha manomboka ny 17 Mey. Manantena izahay fa tsy te hanome takalon'aina ho any amin'ny harena na hanambany ny zava-tsarotra hitanay any amin'ny firenena sasany aleha izay mety te-ho any ny olona. Izahay dia tsy te-hahita ny virus alefa indray eto amin'ity firenena ity avy any ivelany. Mazava ho azy fa misy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, ary tokony hitandrina izany isika. ”
Amin'izao fotoana izao, mpitsangatsangana tonga ny UK avy amin'ny lisitra tsy mena dia takiana amin'ny firenena ny fanaovana fitsapana COVID mialoha ny sidina ary hamita ny fitokana-trano mandritra ny 10 andro (ao anatin'izany ny fitsapana 2 amin'ny andro 2 sy 8 aorian'ny fahatongavany). Amin'ny tetika vaovao, ny mpitsangatsangana miverina avy any amin'ny firenena "maintso" dia takiana amin'ny fitsapana alohan'ny fiaingany ary rehefa miverina izy ireo ary tsy mila hatokana ho azy. Ny fitakiana fitsapana ho an'ny firenena "amber" dia hitohy, fa ny firenena "mena" kosa dia ho faritra tsy misy mandeha.
Dr. Michael Head, mpikaroka zokiolona momba ny fahasalamana manerantany ao amin'ny University of Southampton, dia nilaza tamin'ny ABC hoe: "Raha mankany Frantsa na Espana ianao na na aiza na aiza misy azy, dia hisy olona avy any amin'ny firenen-kafa koa hiala sasatra any. Ary mety ho tandindomin-doza kokoa ny fireneny ary manana tahan'ny tranga ambonimbony sns. Tsy voatery ho raisina amin'ny takelaka UK izany, satria ny firenena andehananao ihany no ifantohany. Ka io no ampahany voalohany nitety an'izao tontolo izao tamin'ny voalohany. ”